खलिफा कसरी भइन् रातारात पोर्नस्टार स्टार ? - knkhabar
खलिफा कसरी भइन् रातारात पोर्नस्टार स्टार ?
पुस २३, २०७६, ४:३९ PM
एजेन्सी। पूर्व पोर्न स्टार मिया खलिफाले बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा पोर्न फिल्म क्षेत्र छोडेको बताएकी छिन् । उनले अन्तरवार्ताको क्रममा उनी उक्त क्षेत्रमा कसरी र किन पुगिन् भन्ने विविध प्रश्नहरुको खुलेर जवाफ दिएकी छिन् ।